Barnaamijyo | SomaliSwiss Wararka Somaliswiss
Home / Archive by category Barnaamijyo
Archive by category Barnaamijyo
Dhagayso: Ignazio Cassis oo loo doortay Wasiir (Bundesrat) dalkaan Switzerland
Arbaco, 20.09.2017 Baarlamanka Switzerland ayaa doortay Wasiir ama Bundesrat oo ah xubin sare oo ka mid noqnaya Golaha Fulinta dalkaan barkhanimadii Maanta oo Arbaca ah. Bundesratka cusub Ignazio Cassis waxaa la tartamay 2 xubnood oo kale kana tirsan isla Xisbigiisa FDP iyagoo ku kala baxay codeeyntii labadaad , Ignazio Cassis oo ku guulaystay waxa uu halay 125 cod Pierre […]
Kaalmeeynta bulshada ( Ceeyrta ) oo korortay 53% Switzerland.
Waxaa lagu waramayaa in 2005 ilaa 2015 aad u kordheen lacagaha lagu bixiyo Caawinta bulkshada oo ahayd 1.7 billion uu hada gaaray 2.6 Billion. bulshada Ceeyrta ku noolka ah ayaa kordhay 11.8% iyagoo ahaa 237.000 halka uu iminka ay gaareen 266.000 sida lagu sheegay qoraaal ka soo baxay SKOS Gobalada Ceytra xoogeeda qaatada waxaa ka mid ah sida […]
Dhagayso: Waraysiga Todobaadka Mustaf Bashiir Goobdoon
Gudoomiyaha jaaliyada Somali swiss diaspora ahna Gudoomiyaha Haayada Swisskalmo Mudane Mustaf Bashiir Goobdoon ayaa todobaadkaan ka waraysanay safar uu ku tagay Gudaha Soomaaliya gaar ahaan Magaalada Dhuuso-Mareeb ee Gobolka Galgaduud. Goobdoon waxa uu sidoo kale ka hadlay Isku keenida Soomaalida ku dhaqan dalkaan Swirtzerland isagoo gabogabadii baaq u jeediyay Somalida Switzerland ka qeyb galka doorashooyinka […]
Dhagayso: Waraysiga Fanaanada Maryan Sheekh Nuur
Isniin, Abriil 06, 2015 (SSW) – Fanaanada Caanka Ah Maryan Sheekh Nuur (Maryan Ruun) oo dagan dalkaan Switzerland ayaa Todobaadkaan Waraysi Dheer oo Taariikhdeeda Fanka ah siisay Warbaahinta Somaliswiss.com Maryan Ruun oo ka mid Ahayd Kooxdii Iftin ee Wasaarada waxbarashada iyo Barbaarinta Soomaaliya waxa ay ka hadashay heesaha Dhawaan ay soo saartay sida heesta Suuroow, […]
Dhagayso: Wararka Todobaadka Somaliswiss ee Switzerland
Wararka Todobaadka ee Somaliswiss.com waxaan ku soo qaadanaynaa wararki ugu dambeeyay ee dalkaan Switzerland gaar ahaan wararkii Todobaadka iyo waraysiyo qaar ka mid Jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan dalkaan Switzerland. Barnaamijka Wararka Todobaadka Si wada jira waxaa u u soo jeedinaya Wariye Maxamed Cumar Daahir iyo Axmed Cabdi Tooyo Studio Radio Kanal K. Somaliswiss.com […]
Dagaal meeshiyo beelleed ku dhaxmaray magaalada Beledweyne
Dagaal socday saacado dhowr ah ayaa maanta ku dhaxmaray xaafadda Howl-wadaag ee magaalada Beledweyne maleeshiyo beelleed waayadii ugu danbeeyayba uu ka dhax aloosnaa xurguf colaadeed. Maleeshiyada dirirtu dhaxmartay oo ka soo kala jeeday beellaha Jajeele iyo Makane ayaa waxa ku geeriyooday labo ruux halka tiro ka badan 7 ruuxna ay ku dhaawacmeen. Hasse ahaatee markii […]
Dhagayso: Axmed Riyaale oo ka hadlay Heshiiskii USN iyo Dowlada Jabuuti
Wakiilka Dallada mucaaradka USN ee dalka Jabuuti ee dalalka Belgium , Holland iyo Luxemburg Mudane Axmed Riyaale Buux ayaa ka hadlay heshiikii bishii december Mucaaradka USN iyo Dowlada Jabuuti ku gaaran Magaalada Jabuuti. Axmed Riyaale waxa uu shegay in heshiiska qodobada dhiman la dhamaystiri doono muda 15 cisha gudahood ah kuwaas oo faaiida badan ugu […]
Haayadaha Gargaarka oo ku booriyay Switzerland Qaabilaada Qaxootiga Siiriya
Qaar ka tirsan Haayadaha gargaarka ayaa ku booriyay dowlada Switzerland soo dhaweynta Qaxootiga u dhashay dalka Siiriya ee ku sugan dalka Lubnaan kuwaas oo ku sugnaa tan iyo markii dagaalada sokeeye ka dhaceen dalka Siiriya. Haayadaha Solidarité sans frontières iyo Swiss Peace Council oo warbixintooda ku faafaahiyay sababta la xiriira soo jeedinta qaabilaada Qaxootiga siiriya […]
Faransiiska oo baadi goobaya labo nin oo loo heysto weerarkii Paris
Dalka France ayaa waxaa ka socda baadi goob loogu jiro labo nin oo walaalo ah oo la sheegay in lagu tuhunsan yahay inay geysteen weerarkii shalay lagu qaaday jornaalka Charlie Hebdo. Booliiska France ayaa shaaciyey sawirada labo nin oo walaalo ah oo lagu kala magacaabo Sharif Kouachi iyo Saciid Kouachi, kuwaasi oo ay laamaha amaanka […]
wafuud caalami ah oo la fillayo in ay soo gaarto Muqdisho
Ciidamada nabad-galyada dowladda Soomaaliya ayaa saakay siweyn ugu howlan sugida ammniga magaalada caasimada ah ee Muqdisho oo la fillayo in ay soo gaaraan wafuud heer caalami ah oo ka socda urur gobolleedka IGAD. Ciidammo aad u hubeysan ayaa la dhigay dhamaanba jidadka waaweyn ee caasimada Muqdisho, waxaana ka mid ah jidka galla garoonka diyaaradaha Muqdisho, […]